Mayelana NATHI - Cangzhou Jinglong Technology Co., Ltd
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2000 futhi inesitshalo sayo esihlala indawo engaphezu kwamamitha skwele angaphezu kuka-5,000 atholakala eDongguang County, edolobheni laseCangzhou, esifundazweni sase-Hebei, eChina. Inkampani yethu inabasebenzi abangaphezu kwama-60 abaqashiwe, kufaka phakathi ochwepheshe abasezingeni eliphakeme, ochwepheshe, kanye nabasebenza ngemishini.
ICangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) inesigaba esiyisisekelo esenza imikhiqizo yemishini (izipikha zezinyoni, iziteshi zokudoba amagundane nezicupho, njll.) Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende asekhaya naphesheya kwezilwandle.
Isigaba sesibili senkampani sisebenza nabahlinzeki abathembekile basekhaya futhi sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kubaqeqeshi bezilokazane emhlabeni wonke. Izimpahla zingathunyelwa ndawonye esitsheni esigcwele ukongela izindleko zezimpahla
Manje sesineqembu elizilungiselele ngokuphelele ukuqondisa ngokugcwele nangokuzibophezela nokusiza amakhasimende ethu ngezidingo zawo ezenziwe ngezifiso.
NJALO LAPHA IZINZUZO ZAKHO!
UJinglong uyasebenza embukisweni waminyaka yonke wamazwe omhlaba wemboni yokulawula izinambuzane.
Ungahlala uthola iJinglong (Telex) e-EXPOCIDA IBERIA, FAOPMA, Parasitec Paris, Pest Italy-Disinfestando, Pest Protect, Pest EX, njll.
Sithanda ukuzwa kubangane bethu bamabhizinisi abasha nabasha ngezidingo zabo.
Ukwenza ngcono imikhiqizo yethu nokunikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso yilokho uJinglong agxile kukho.
UJinglong uthole isitifiketi se-ISO9001: 2015 kanye nokuHlola Izimo Zasemsebenzini esivunyelwe yi-Intertek.